मनकामना केबलकार केहि दिनका लागि बन्द हुने
काठमाडौं । मनकामना केबलकार चैत्र २५ गतेदिखी केहि दिनका लागि बन्द हुने भएको छ। केबलकारको स्तरोन्नतिको पहिलो चरणको काम गर्न केहि दिन केबलकार बन्द हुन लागेको हो। मनकामना दर्शन प्रा.लि. का अनुसर चैत २५ देखि ३० गते सम्म बन्द गर्न लागिएको हो ।
यो अवधिभर केबलाकरको बटम स्टेसनमा रहेको रेष्टुरेन्टभने यथावत रुपमा सञ्चालन हुने जनाइएको छ । त्यस्तै चैत ३१ पछि गतेदेखि पुनः सञ्चालन हुने मनकामना दर्शन प्रा.लि. ले जनाएको छ ।